PDF Pro 2, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
PDF Pro 2, yemahara kwenguva shoma
Iyo faira rePDF faira rave iro rinonyanya kushandiswa pakuratidzira magwaro kunzvenga zvinotevera shanduko, kungave kuburikidza nemakambani akazvimirira kana kuburikidza nemasangano eruzhinji. MuApp Store tinokwanisa kuwana nhamba hombe yezvishandiso zvinotibvumidza kuti tigadzirise mafaira mune iyi fomati. Nhasi tiri kutaura nezve PDF Pro 2, chishandiso chinotibvumidza kuverenga, kugadzirisa uye kududzira mafaira ePDF zvakananga kubva kune yedu iPhone nePad. Ichi chishandiso chine mutengo wenguva dzose muApp Store ye 3,99 euros, asi kwenguva yakati wandei tinokwanisa kurodhaunura mahara kuburikidza neiyi link yandinosiya panopera chinyorwa.
NePDF Pro 2 tinogona kusimbisa zvinyorwa, kutora zvinyorwa, kudhirowa neminwe yedu, kuwedzera mazwi akarekodwa kana zvirevo zvemifananidzo., tsvaga zvinyorwa mukati mePDF mafaera uye muraibhurari yese yemafaira atinawo mukushandisa. Izvo zvinoenderanawo nemafomu ari muPDF mafaera pamwe nekutibvumidza kusaina magwaro mune iyi fomati.
PDF Pro 2 inoenderana neDropbox, Google Drive, maFTP maseva, WebDAV… Asi isu tinogona zvakare kuakopa iwo akananga kunyorera kana isu tikabatanidza smartphone yedu kuTunes kana kuvhura ivo zvakananga kubva kune tsamba yekushandisa nekuda kwekuwedzera kunopihwa nechishandiso. Kana tangopedza kugadzirisa iyo faira, kusanganisira zvirevo, tinogona kuzviprinta zvakananga kubva kuchishandiso icho kana tinogona kuchigovana kuburikidza neemail.
Imwe yesarudzo idzo PDF Pro 2 inayo uye yatisingakwanise kuwana mune mamwe mashandiro erudzi urwu, kuenderana nemafaira akachengetedzwa nepassword, password yatinofanira kuziva kuti tivhure gwaro sezvazvinonzwisisika. Kana isu tichiwanzoshanda neiyi faira fomati, iwo mukana wakanaka wekuyedza imwe application, kunyanya sezvo ichiwanikwa kuti utorwe mahara uye kupemberera kuvhurwa kweshanduro 3 yePDF Pro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » PDF Pro 2, yemahara kwenguva shoma
Iyo pro vhezheni 3 zvakare yemahara
Chokwadi, asi ndizvo zvimwe chete zvakagadziridzwa nezvakatengwa ne-mu-app kuti ugone kuita zvakafanana neshanduro 2
Tekisi yeramangwana iri chikamu chezvino (I): Cabify
Kubva pane modular tambo kune bhatiri tambo yeApple Watch